Umfundi waseRhodes uphangwe ngakwaMr Price ngenjikalanga yayizolo – Activate Online
Home / isiXhosa / Umfundi waseRhodes uphangwe ngakwaMr Price ngenjikalanga yayizolo
Umfundi waseRhodes uphangwe ngakwaMr Price ngenjikalanga yayizolo
DavidMann 02/04/2014	isiXhosa, News, Top Leave a comment 3,317 Views
Umfundi waseRhodes uphangwe phambi kwakwaMr Price ngenjikalanga yangoMvulo, ngama-31 kweyoKwindla 2014. Abantu basetyhini abane nekucaca ukuba ngamasela bamhluthele ingxowa yakhe ngendlela nje engaqondakaliyo.
Usuku obeluqhakrazile luka Zintle Njozela owenza unyaka wakhe wesibini kwizifundo zenzululwazi eYunivesithi iRhodes lujike lwamfiliba akuba ehluthelwe ingxowa yakhe. Le ngxowa ibinemali engama-R330, umnxeba, isazizi, ikhadi lomfundi kunye nekhadi lakhe lebhanki.
Ngokokuthso kwakhe, uZintle uthe engena evenkileni yakwaMr Price malunga nentsimbi yesine emalanga wadibana nomntu wasetyhini ophethe iplastiki egcwele qhu yimpahla. Lo mntu uye wamlahlekisa ngokusuke athi uza kufumana isaphulelo xa ethenga impahla yakhe apho kwaMr Price.
“Ndiye ndangathi ndiyamkholelwa ke nam kuba esithi unomhlobo wakhe osebenza phaya kwaMr Price”, utshilo uZinlte.
Lo mntu wasetyhini uqhube ngelithi uZintle makabeke ingxowa neeplastiki zakhe bucala ukuze umhlobo wakhe akwazi ukumlungiselela, amthengisele ke ngesi saphulelo. Uthe uZintle ephuma kwaMr Price esiya kudibana nalo mntu unempahla yakhe wafika sele kukudala watya kwabanentsente.
“Bekungase ndingavele ndihlale phantsi ndisitsho isikhalo”, utshilo uZintle.
Emva koko uZintle uye waleqa esitishini samapolisa nalapho acelwe ukuba abuye ngosuku olulandelayo ukuze avule ityala.
Ayikuko okokuqala abantu bephangwa zizikrelemnqa ezenza ngathi ziphangela kwaMr Price kwaye le nto ayenzeki kule venkile kuphela. UNomonde Dyonase ongusekela manejala wakwaMr Price uthi la masela axhaphaka nangakumbi xa kuphela inyanga naxa kuyimini yepeyi. UNomonde ucebise ngelithi abantu mabahlale beqaphele xa bethenga kwaye bayazi ukuba umntu osebenza kwaMr Price usoloko enxibe iyunifomu yakhona.
“Ukuba umntu akanxibanga sikipa simnyama esibhalwe Mr Price engenayo nename tag uboyazi ukuba akaphangeli lapha”, utshilo uNomonde. “Futhi xa sinesaphulelo kwintengiso yethu ibakhona into ebhaliweyo exela oko” wongeze ngelitshoyo.
UZintle ebengekho yedwa kule nyewe imehleleyo. Ebekunye nabantu abathathu abathe balahlekelwa ziingxowa zabo bona kuqala. Omnye wabo bantu ngowasetyhini othe wohluthelwa ikhadi likaninakhulu lemali yesibonelelo sikarhulumente, isazisi nkqu nalo mali ebevela kuyikhupha ebhankini.
Akuphephanga tu ukuhamba edolophini uwedwa futhi noba sele kusemini ilanga lihlabe umhlaba. “Musa ukuncokola nabantu ongabaziyo xa usedolophini”, ucebise ngelitshoyo uZintle. “Uya kuthi ubonikalisa Ubuntu kanti uzenza nje ixhoba lamasela”, wongeze ngelitshoyo.
eastern cape crime grahamstown grahamstown crime Grahamstown news isixhosa IsiXhosa Journalism mr price robbery robbery grahamstown South Africa crime Xhosa	2014-04-02
Tags eastern cape crime grahamstown grahamstown crime Grahamstown news isixhosa IsiXhosa Journalism mr price robbery robbery grahamstown South Africa crime Xhosa
Previous Cliff hanger- Gareth Cliff getting involved in student radio
Next SAMWU makes demands to Makana